Imibuzo Evame Ukubuzwa - D&L Industry And Trade (Xuzhou) Co. Ltd.
Ngingakwazi ukufaka ilogo yami ezingilazini zelanga?
Yebo, ilogo yangokwezifiso iyatholakala.
Iliphi ifayela engizodinga ukukuthumelela lona?
I-AI noma i-PDF
Izindleko zesampula ziyabuyiselwa noma cha?
Yebo, inani elincane le-oda elivela kusitoko ngu-2 · 10pcs.
Yiziphi izinzuzo zamalensi enziwe isibuko?
Amalensi afakwe esibukweni anombala okhanyayo onciphisa inani lokukhanya elidlula liye esweni.
Yiziphi izinzuzo zamalensi e-gradient?
Amalensi e-gradient ayafiphala ukusuka ekubeni mnyama kuya ku-tint elula, okuvumela i-xision evumelanayo ebangeni elibanzi lebanga nezimo zokukhanya.
Kufanele ngizinakekele kanjani izibuko zami zelanga?
Ukugcina izibuko zakho zihlanzekile ngokubasiza - nawe - ubukeke umuhle futhi wenza kahle.Kodwa-ke, izibuko zelanga ze-premium futhi ikakhulukazi amalensi azo adinga ukwelashwa ngokucophelela.Ukunakekelwa okungafanele kungalimaza amalensi, okuholela ekuklwebheni noma ukungezwani, okungase kubangele i-eyestrain.
Ngakho-ke, indlela engcono kakhulu yokuhlanza izibuko zakho zelanga iwukuzihlikihla kahle ngendwangu yokuhlanza ilensi kanye nesihlanzi esiwuketshezi esiklanyelwe ngokukhethekile amalensi ezingubo zamehlo, noma ngethawula lens elifakwe ngaphambili.
Ukuze ugweme umonakalo, ungalokothi uhlanze izibuko zakho zelanga ngamathawula ephepha noma izingubo, ezingagaya uthuli nemicu ibe amalensi futhi ishiye imihuzuko.Gwema futhi ukusebenzisa izinto zokuhlanza zasendlini noma insipho.Nakuba izinsipho ezimbalwa ezithambile zingalimazi amalensi, insipho yanamuhla enamandla engeziwe inamandla ngokwanele ukuhlakaza kancane amalensi anamathelayo.Izihlanzi zengilazi ikakhulukazi zigqwala kakhulu futhi zingalimaza amalensi akho ngokushesha.Aziklanyelwe ukusetshenziswa kumalensi okungewona wengilazi asetshenziswa ezingilazini zelanga.
Nakuba ungekho kule mikhiqizo ozokwenza umonakalo osobala ezinzwa zakho, ngokuhamba kwesikhathi nangokuphindaphinda, umonakalo uzobonakala.